Fincilli Diddaa Gabrummaa Itti Fufe! Barataan Oromoo Geedootti gootummaan Wareegame, Kaan Madaayan. 80 ol ammo University Bahir-Darii Ariyaman.
(Madda Oduu ABO/MOA Bito,7,2009) Mootummaan faashistii Wayyaanee Godina Shawaa Dhihaa magaalaa Geedootti barataa Oromoo Wandimmaa Daammanaa jedhamu ajjeesuu fi kanneen biroo madeessuun isaa sirnichi diinummaa fi jibba ummata Oromoof qabu caalaatti hammeessuu isaa mul’isa jechuun sabboontotni Oromoo hubachiisan.
Oduun Oromiyaa bakka adda addaa irraa nu dhaqqabaa jiru akka hubachiisutti, Godina Shawaa Dhihaa magaalaa Geedootti Sadaasa 3,2009 tarkaanfiin ajjechaa barataa Wandimmuu Daammanaa irratti faashitoota Wayyaaneen fudhatame dheekkamsa hawaasa Oromoo dhalchaa jira.
Hoogganootnii fi qondaalotni Wayyaanee naannoo, mana barumsaa sad.2ffaa Geedootti barattoota Oromoo fi Amaaraa walitti buusuuf barruu maqaa saba Oromoo tuqu barreessanii mooraa mana barumsichaa keessatti gatuu isaanii kan ibsan maddeen keenya, maddi rakkoo dhalatees kana ta’uu ifa godhan.
Barruu maqaa ummata Oromoo xureessu kana eenyu akka barreessee fi mooricha keessattis eenyu akka gate qorachuuf barattootni Oromoo fi Amaaraa waliin ta’anii waajjira mana barumsichaa dhaqanii gaafatanis deebii sirnaa dhabuu isaaniitu gabaafame.
Gochi mootummaa wayyaanee kun kan agarsiisu sirnichi amma illee ummata Oromoo xiqqeessuuf duula gama hundaan geggeessu cimsee itti fufuu isaa ti kan jedhan beektotni siyaasaa ammoo gama isaaniin, tattaaffiin wayyaanee kun torban tokkoon dura barattoota Oromoo Yunversitii Baar-Daar irratti kan raawwateen walitti hidhata kan qabuu fi tokkicha jedhan.
Mootummaan faashitii Wayyaanee waraana isaa mana barumsaa sad.2ffaa Geedootti bobbaasuun tarkaanfii humnaa barattoota meesha maleeyyii irratti akka fudhatan gochuun, hidhattootni kun battalumatti barataa tokko yeroo ajjeesan, qonnaan bultoota naannoo dabalatee barattoota hedduu madeessaniiru. Barattootni 30 ol ta’an ammoo ukkaamfamuun fudhatamaniiru.
Kana irratt hundaayuun barattootni Oromoo martii fi walii galli ummatni Oromoo tarkaanfii faashistummaa barattoota Oromoo Geedoo irratti fudhatame akka balaaleffatanii fi sagalee mormii akka dhageessisan sabboontotni Oromoo waamicha lammummaa dabarsanii jiru.
Barattootni Oromoo Yunversitii Baar-Daar 80 ol ta’an hidhattoota Wayyaaneen hidhaman.
(Madda Oduu ABO/MOA Bito,7,2009)Barattootni Oromoo Yunversitii Baar-Daar kanneen maqaa ummata Oromoo xureessan seeratti haa dhihaatan jedhanii gaaffii sirnaa waan gaafatan qofaaf mootummaan wayyaanee hidhattoota isaa itti bobbaasee miidhaa ulfaataa irraan ga’aa kan jiru oggaa ta’u, barattoota 80 ol ta’an mana hidhaatti darbee dararaa jira.
Humnootni federaalaa wayyaanee barattoota Oromoo adamsanii qabaa kan jiran oggaa ta’u, halkanis doormii isaanii cabsanii seenuun tumaatii dhala namaaf hin malle irratti geggeessaa akka jiran maddeen keenya ifa godhaniiru.. Barattoota shamarran Oromoo irrattis reebichii fi dararaan hamaan hidhattoota wayyaanee kanaan akka dhaqqabaa jiru barameera.
Barattootni dhaanamanii mana hidhaatti guuraman haga ammaa waldhaansa dhorkatamanii haala ulfaataa keessa jiraachuu kan gabaasan maddeen keenya, warri halkan butaman ammoo lakkoobsi isaanii kan hin baramne, eessa akka jiranis kan hin beekamne ta’uu hubachiisu.
Barattootni Oromoo Yunversitii Baar-Daar rakkoo hamaa keessatti kufanii jiraachuu oduun kun ifa gochuun, barattootni Oromoo fi ummatni Oromoo walii galli akka dirmataniif yaamicha dabarsuu isaanii addeessa.
Sababi barattootni Oromoo kunniin miidhamaa jiraniif, kanneen ummata Oromoo xureessan seeratti nuuf haa dhihaatan jedhanii waan gaafatan qofaaf ta’uun beekameera.
Maqaa BPR ykn JBAHA jedhuun hojjettootni miseensummaa OPDO didan hojii irraa ari’amaa jiran.
(Madda Oduu ABO/MOA Bito,7,2009)Wayyaanotni karaa dhaaba ergamtuu isaanii OPDOn maqaa BPR ykn JBAHA jedhuun hojjettoota Oromoo miseensummaa dhaaba jalee kanaa ta’uu didan hojii irraa ari’uu akka itti fufanii jiran MOA gabaase.
Hojjettoota hojii isaanii irratti cimoo ta’anii fi miseensummaa OPDOn ala oguma isaaniin jiraachuu fedhan mirga sarbuun maqaa hir’ina naamusa hojiiitiin bal’inaan ari’uu irratti argamu. Maqaa JBAHA jedhu kanaan waajjiraalee hunda keessatti dabballootni wayyaanee hojjettoota miseensa OPDO hin taane hordofuun hojii irraa ari’uuf itti dhaadataa jiraachuunis gabaafameera.
Warri miseensummaa OPDO didanii hojii isaanii gadi dhiisan irrattis gartuun hordoffiin irratti godhamaa jiraachuu maddeen keenya ni ibsu. Waajjiroota fayyaa kan Godinaa, Onaa fi gandaa irra hojjettoota jiran irrattis dhiibbaan mul’ataan taasifamaa akka jiru barameera.
Gama biraan miseensotni OPDO oguma fayyaa extenshiniitiin leenjifamanii ummata irratti ramadaman irra guddaan dubartoota kaabinoota paartii ta’an hir’ina naamusaa qaban oggaa ta’u, ummata tajaajiluu irra miidhaa ulfaataa kanneen irraan ga’aa jiranii fi ummatni jibbee of irraa iyyataa jiru ta’uunis himameera.
Wayyaaneen ummata dhukkubsate qoricha dhorkachuun, beela’ee osoo jiruu qe’ee fi qonnaa irraa buqqisuun abaabuu dhaabuun rakkina uumaa jiraachuu oduun kun eeruudhaan, kanneen kana morman hidhaatti guuraa jiraachuu ifa godhe.